Nezvedu - Wilongda Technology Co, Ltd.
Wilongda Technology Co, Ltd. inogadzira akasiyana ekutsiva mota mumashure-musika zvikamu, auto kiyi isina chinhu, transponder makiyi, kure control.which inovhara anopfuura makumi matanhatu makuru emhando dzemotokari dzine Audi, BMW, Mercedes, Volks Wagen, Renault, Peugeot , Citroen, Fiat, Ford .... zvigadzirwa zvinotengeswa kune ese epasirese, zvakanyanya kuUSA, Europe, South America nezvimwe, gamuchirai vatambi veOEM neODM kuti vabatane nesu.
● Kuvimbisa Unhu.
● Enzanisa purogiramu yako.
● Shandira Bhajeti yako.
"Hupenyu hupenyu hwedu, sevhisi mweya wedu!" ndiko kutenda kwebasa redu. Kubva pane tekinoroji yepamusoro, kubatana pamwe nehunyanzvi, isu tinodzorawo mutengo kuburikidza needu epamberi manejimendi, kuti tikwanise kupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro pamwe nemutengo unonzwisisika. Isu tinotarisira kupa yakanyanya kuvimbika uye yehunyanzvi sevhisi kune edu epasirese anokudzwa vatengi.
Wilongda Technology Co, Ltd inoteedzera bhizinesi mutemo we "Hunhu huri pamusoro pezvose, sevhisi inoita ramangwana", uye inoteedzera yekutanga-kirasi mhando uye kusimukira kwesainzi. Kuburikidza nekuenderera mberi kwekuvandudzwa kwemakambani manejimendi uye nekuedza kusazvipira mukutsvaga kumisikidza hukama hwemazuva mazhinji hwekushandira pamwe, isu tinopa nemoyo wese vatengi vedu zvigadzirwa zvinotungamira nemasevhisi. Ticharamba tichivandudza nekugadzira zvigadzirwa zvakawandisa uye zvirinani kune vatengi vanokoshesa mhando uye chiratidzo chemhando.
Neye kukurumidza kuvandudzwa kwemotokari kiyi indasitiri, isu tinonyatsoteedzera kuvandudza kwepasirese kuratidza tekinoroji yepasirese, kuve chokwadi uye hunyanzvi, uye kugara uchivandudza!
Vatengi vanogamuchirwa kubvunza uye kuodha zvigadzirwa zvedu.
Ipa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye dzidzisa vashandi vepamusoro.
Tungamira kukura kweiyo indasitiri yeLCD uye uve wekutanga-kirasi inogadzira makiyi emotokari! )
--- Vanhu-vakatarisana, vachitsvaga chokwadi kubva kuzvokwadi, vachitsigira hunyanzvi, uye vachigara vachipfuura)
(Bhizinesi uzivi: - Yakakwira mhando, hunyanzvi, kuvimbika, kuomarara
Yakakwira mhando: ipa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye nehunyanzvi masevhisi
Innovation: Kushandiswa kwetekinoroji nyowani uye kuenderera kwekugadzirwa kwezvinhu zvitsva uye matekinoroji
Kuvimbika: Enterprise ndiyo hwaro hwekusimudzira bhizinesi. Pasina kutendeseka, hapana chinhu
Rigorous: Kunyatsozvida isu, bata hukama hwevatengi nokungwarira, uye kupa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye technical services